Shirka xaquuqda shaqaalaha ajnabiga - BBC Somali
Shirka xaquuqda shaqaalaha ajnabiga
Image caption Shaqaalaha ajnabiga ee dhismaha ee ka shaqeeya dalalka dibadda.
Shir looga hadlaayo xuquuqda dadka shaqada u aada dibadda ayaa ka furmay magaalo madaxda Bangladesh ee Dhaka.
Shaqaalaha ajnabiga ee ka imaada qaarada Asia ayay waxay wadamadooda u diraan lacag dhan qiyaastii boqol iyo toddobaatan iyo shan bilyan oo dollar sanadkii hore, taasoo ay dalal badan oo ka qaybqaadanaya shirka ay xajiiyeen inay dhaqaalaha wadanka kabto.
Waxaa ay dowladda Bangladesh kaga dhawaaqday inay furayso bangi lacag siiya dadooda dibada u aada shaqada markay inay aadaan dibadda.
Waxay kaloo dowlada bangladesh bilowday sanadkii hore inay dhiibto kaarar ay ku qoran yihiin shirkadaha shaqaaleeya dadka, iyo iyo heshiiska ay la galaan shaqaalaha. Si loola socdo xaaladooda,
hadii loo baahdana la dacwayn karo shirkadaha shaqaaleeya dadka markii ay ku xad gudbaan xaquuqda shaqaalaha.
Laakiin, dadka u ololeeya xaquuqda shaqaalaha ajnabiga ayaa sheegaya in loo baahan yahay inay ka midoobaan waddamada siday uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka uga imaada shaqaalaha ajnabiga dalalka ay ka shaqeeyaan.
Dalalka gacanka carabta oo ay ku badan yihiin ajnabiga u soo shaqo tago ayaa shaqaalaha waxay la kulmaan xad gudub ay ka mid yihiin inaan mishaar la siin, Baasaboorkoodana laga qaato .
Hindiya ayaa la saxiixday heshiis ku saabsan dadkeeda ka shaqeeya Isutaga Imaaraadka Carab.
Laakiin haya'dda dadka dalalkooda ka taga ee IOM, ayaa aaminsan in loo baahan yahay sharci caalami ah iyo hab caalami ah oo looga hortago markii ay shaqaalaha ajnabiga ay dhib la kula kulmaan waddamada ay ka shaqeeyaan.